I-Winpal: Ilebula ye-Wholesale kanye Nephrinta Yerisidi, Iphrinta ye-Oem Wifi
4 IMASHISI YELABEL
3 IMASHISI ESILISIZI
2 IMASHISI ESILISIZI
WPB200 4″ Iphrinta Yelebula
Iphrinta Yelebula ye-WP-T3A 4″
I-WP300A 4″ Iphrinta eshisayo
WPLB80 80mm Iphrinta Yelebula Eshisayo
I-WP80L 3″ Iphrinta Yelebula Eshisayo
WPLB58 58mm Iphrinta Yelebula Eshisayo
I-WP300W 3″ Iphrinta Yerisidi Eshisayo
Iphrinta yerisidi eshisayo ye-WP260 80MM
WP230C 80mm Iphrinta Yerisidi Eshisayo
Iphrinta yerisidi eshisayo ye-WP260K 80mm
WP230F 80mm Iphrinta Yerisidi Eshisayo
WPCB58 58mm Iphrinta Yerisidi Eshisayo
Iphrinta yerisidi eshisayo engu-WP-T2A 58mm
Iphrinta yerisidi eshisayo engu-WP-T3K 58mm
WPB58 58mm Iphrinta Yerisidi Eshisayo
Iphrinta yerisidi eshisayo engu-WP-T2C 58mm
I-WP-T2B 58mm Iphrinta Yelebula Eshisayo
I-WP-Q3C 58mm Iphrinta Yeselula
Xhumana namakhasimende ukuze uqoqe izidingo zekhasimende.
Unjiniyela ubhale idizayini futhi yaqinisekisa nekhasimende.Uma kudingeka ukulungisa, unjiniyela wethu uzoshintsha futhi akuqinisekise kabusha.
Ukuklama nokwakhiwa kwebhodi lomama
Isampula izokwenziwa ngemva kokuthola ukugunyazwa kanye nomklamo uqinisekisiwe.
Yonke imikhiqizo yethu ihambisana nezindinganiso zamazwe ngamazwe futhi ithole i-CCC, CE, FCC, Rohs, isitifiketi se-BIS sokuphepha. Imboni yethu inabasebenzi abangaphezu kuka-700 kanye nochwepheshe be-R&D abangu-30. Imigqa yokukhiqiza ehlome kahle kanye nomnyango wokuhlola ungakwazi ukulawula ngokuphelele izinga elingasebenzi kahle lephrinta elingaphansi kuka-0.3%.Ngenxa yokukhiqiza kanye nemikhiqizo enokwethenjelwa okuphezulu, singahlinzeka ngesevisi ye-OEM ne-ODM ngesidingo samakhasimende ahlukene futhi sihlangabezane nokwaneliseka kwamakhasimende.
Amalebula amafa ahlonza okokusebenza kusetshenziswa inombolo ye-serial ehlukile noma ibhakhodi.Amathegi amafa ngokuvamile amalebula ane-adhesive backing.Izinto ezivamile zamathegi wempahla ziyi-aluminium anodized noma i-polyester elaminethiwe.Imiklamo evamile ihlanganisa ilogo yenkampani kanye nomngcele ohlinzeka ngokuhlukile kumishini...
Iphrinta yerisidi, Thumela Iphrinta, Iphrinta yerisidi yeselula, Iphrinta Yeselula, 80mm Iphrinta Yerisidi Eshisayo, Iphrinta Eshisayo,